विश्व समाचार Archives - Page2of9- Purba Nepal
डोनाल्ट ट्रम्पको एसिया भ्रमण आज बाट, कुन कुन देशमा पुग्छन् त ट्रम्प
on: In: Highlights, विश्व समाचार, समसामयीक
कात्तिक १८ –
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ११ दिन लामो एसिया भ्रमण सुरु भएको छ । यो भ्रमणको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनाम र फिलिपिन्स पुग्नुहुनेछ । पछिल्लो २५ वर्षमा कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले गर्न लागेको यो लामो एसिया भ्रमण हो । उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला सुरु भएको ट्रम्पको भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ लिइएको छ । उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान एक पक्षमा छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भ्रमणको क्रममा उत्तर कोरियाको विषयमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान एकताबद्ध रहेको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्दै आएको चीनलाई थप दबाब दिने पनि आंकलन गरिएको छ । ट्रम्पले यसअघि पनि चीनसँग उत्तर कोरियालाई परमाणु कार्यक्रम रोक्न दबाब दिन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।
भ्रमणको सुरुमा ट्रम्प अमेरिकी राज्य हवाइ पुग्नुभएको छ । उहाँ त्यहाँ अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डको ब्रिफिङमा सहभागी हुनुभएको छ । त्यहाँबाट उहाँ प्रथम महिला मिलानिया ट्रम्पसँगै जापान प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँ आइतबार जापान पुग्नुहुनेछ । ट्रम्प जापान भ्रमणसकेर त्यहिँबाट मंगलबार दक्षिण कोरिया जाने सिएनएनले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाबाट चीन जानुहुनेछ । चीन बसाइको क्रममा ट्रम्पले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि भियतनाम जाने ट्रम्पले त्यहाँ एसिया–यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेसनको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । एसिया भ्रमणको अन्तिम गन्तव्य हुनेछ फिलिपिन्स । उहाँले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा हुने दक्षिण पूर्वी एरियाली देशको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तै किसिमको एसिया दौडाहा सन् १९९१ को अन्त्य र १९९२ को सुरुमा भएको थियो । त्यसबेलाका राष्ट्रपति जर्ज एचडब्लु बुस एसियाली क्षेत्रको १२ दिने भ्रमणको क्रममा जापानमा वान्ता गरेर फेन्ट पनि हुनुभएको थियो ।
यसकारण डोनाल्ट ट्रम्पले भनेका रहेछन् ‘ डिभि भिषा बन्द गरौ’
on: In: Highlights, प्रवास, विश्व समाचार
काठमाडौ/ कार्तिक १६ न्युयोर्कर्को म्यानह्याटनमा भएको आतंकारी हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको डिभी लट्री भिसा बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। ८ जनाको मृत्य...	Read more
जानाजान एचआइभी सार्ने यि युवकलाई २४ बर्ष जेल सजाँय
on: In: विश्व समाचार, समसामयीक
इटलीको रोमस्थित एउटा अदालतले ३० जना महिलामा जानाजान एचआइभी सारेको अभियोगमा एक पुरुषलाई २४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ।
तीमध्ये एकजना १४ वर्षकी मात्र थिइन् जतिबेला टालुटोसँग उनको शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल र ’डेडिङ’ वेबसाइटमा ’हार्टली स्टाइल’ भन्ने नाम राखेर उनले मानिसहरुसँग सम्पर्क बनाउने गरेको बताइएको छ।
टालुटोका वकिलले उनको क्रियाकलाप ’मूर्खतापूर्ण भएपनि जानाजान नभएको’ दाबी गरेका छन्।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार कण्डम लगाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्न आग्रह गरेका महिलाहरुलाई टालुटोले त्यसबाट आफूलाई एलर्जी हुने र हालसालै एचआइभीको परीक्षण गराएको बताउने गरेका थिए।
तस्वीर कपीराइट क्अष्भलअभ एजयतय ीष्दचबचथ
केही महिलाहरु एचआइभीबाट संक्रमित भएपछि उनको विरोध गर्न पुग्दा टालुटोले आफूमा एड्स निम्त्याउने प्राणघातक एचआइभीको जीवाणु नभएको बताएका थिए।
टालुटोको क्रियाकलापले गर्दा उनले प्रत्यक्ष रुपमा एचआइभी सारेका एक महिलाबाट अर्का चारजना (तीनजना पुरुष र एक बच्चा) संक्रमित हुन पुगे।
गत महिना अभियोजनाकर्ता एलिना नेरीले भनेकी थिइन्, “उनका क्रियाकलापको उद्देश्य मृत्यु फैलाउनु रहेको थियो।“
तर टालुटोले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, एचआइभीबाट संक्रमित भएको थाहा भएको भए वास्तविक सम्बन्धहरु बनाउनका निम्ति मैले प्रयास गर्ने थिइनँ।
टालुटोकी आमा एचआइभी संक्रमित लागुऔषध दुर्व्यसनी थिइन् र टालुटो चार वर्षको हुँदा उनकी आमाको मृत्यु भएको थियो।
निर्णय सुनाउनुअघि न्यायाधीशहरुले फैसलाबारे १० घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेका थिए।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतको फैसला सुनाइंदा पीडितहरु रोएका थिए।
कतारका अप्रबासी श्रमीकका लागी खुसीको खबर, सरकारद्धारा न्युनतम तलब तोकीने
on: In: Highlights, प्रवास, विश्व समाचार, समसामयीक
कात्तिक ९, काठमाडौं ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको बैठकको एक दिन अघि कतार सरकारले श्रम कानुनमा सुधारको घोषणा गरेको छ ।
अब कतारले मजदुरहरुको न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले आप्रवासी मजदुरहरुको स्थितिलाई लिएर कतार सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय मजदुर संगठनले पनि आप्रवासी मदजुरहरुमाथिको शोषण बन्द गर्र्न चेतावनी दिइसकेको थियो ।
कतार सरकारले डिसेम्बर २०१६ मा कफाला सिस्टम अन्त्य गरेको थियो, जस अनुसार कामदारले जागिर वा देश छाड्नु अघि कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो ।
अब कतारले श्रम कानुनमा सुधार ल्याउने बताएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार कतार सरकारले आफ्नो श्रम कानुनमा परिर्वतन गरेको छ ।
अब सबै कामदारको न्यूनतम तलब तोकिनेछ । कम्पनीहरुले कतार छाड्न रोक लगाउन सक्दैनन् भने कामदारहरुको पहिचान पत्र कम्पनीले नभई सरकारले जारी गर्नेछ ।
on: In: Highlights, दुर्घटना, प्रवास, विश्व समाचार, साहित्य
मलेसियाको पेनाङ शहरमा आज बिहानै बिदेशी कामदार बोकेका दुईवटा बस एक आपसमा जुध्दा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान पेनाङ स्थीत जुरो टोल प्लाजा नजिकै सोनी कम्पनीको कारखानामा कार्यरत नेपाली र इण्डोनेसियन कामदार बोकेका बस जुधेर उक्त दुर्घटना भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
बिहान साढे ५ बजेतिर भएको दुर्घटनामा परेर अन्य ३३ जना कामदार गम्भिर घाइते भएको न्यू स्ट्रेट टाइम्सले जनाएको छ ।
मृत्यु हुने कामदारहरुको नाम खुलाइएको छैन् । प्रहरीका अनुसार मृतक सवै महिलाहरू रहेको जनाइएको छ। यसबारेमा अहिलेसम्म क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासले भने केही पनी जानकारी दिएको छैन् ।
मृत्यु हुनेहरू कुन देशका कति नागरिक भन्नेमा अहिलेसम्म मलेसिया प्रहरीले केहि जानकारी दिएको छैन ।
पटका पड्काउदा ३० को आखामा गम्भीर चोट
on: In: दुर्घटना, विश्व समाचार, समसामयीक
भारतको तेलङगाना राज्यमा पटका पड्काउदा आँखामा चोट लागेका काम्तीमा तीस जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। दीपावलीको अवसरमा बिहीबार बेलुका पटका पड्काउदा उनीहरूको आँखामा चोट लागेको राज्यका स्वास्थ्य मन्त्रीले शुक्रबार जानकारी दिए।
उनीहरू सवैको अहिले सरकारी अस्पताल सरोजिनी आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताए। भारतमा दीपावलीको वेला पटका पड्काउने प्रचलन अत्यधिक रहेकाले अरु पनि धेरै जनाको आँखामा चोट लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
“गएराती देखि सरोजिनी आँखा अस्पतालले मात्रै ३० जनाको उपचार गरेको छ,” राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री सी लक्ष्मण रेड्डीले भने।
आँखामा चोट लागेका मध्ये छ जनाको शल्यक्रिया नै गर्नु पर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकले बताएका छन्।
उनीहरुलाई पर्याप्त हेरचाहसहितको राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको पनि मन्त्री रेड्डीले बताए। भारतमा अहिले मनाइरहिएको हिन्दुहरूको पर्व दीपावलीलाई दीप वा उज्यालोको पर्व पनि भनिन्छ। यो पर्वमा अत्यधिक पटकाहरु पड्काउने गरिन्छ । (रासस/सिन्ह्वा)
आज तिहारको अन्तिम दिन भाइटीका, ११:५१ बजे उत्तम साइत
टीका लगाउनु अघि के गर्ने ? कता फर्किएर बस्ने ?
नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारको अन्तिम दिन आज भाइटीका, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर मनाउँदैछन् । भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५१ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले भने, ‘उत्तम साइत खोज्नेहरुका लागि ११ः५१ मा उत्तम साइत छ । भाइटीकालगायत महत्वपूर्ण साइत अभिजित मुहूर्तमा दिइने भएकाले मध्याहृनको समय निकालिएको हो, तर पनि दिनभर टीका लगाउन सकिन्छ ।’
भाइटीका शनिबार परेकाले बिहान ८ बजेसम्म भने टीका लगाउन नहुने गौतमले बताए । उनका अनुसार शनिबार बिहान काल बेला पर्ने भएकाले ८ बजेपछि भने दिनभर टीका लगाउन बाधा हुनेछैन ।
टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले एकअर्कालाई आशिर्वादसहित उपहार दिने प्रचलन छ ।
टीका लगाउँदा कता फर्किने ? लगाउनु अघि के गर्ने ?
भाइटीकाको समय दाजुभाइ पश्चिम फर्केर बस्न र दिदीबहिनीले पूर्व फर्केर टीका लगाइदिन राम्रो हुन्छ ।
आज पश्चिममा चन्द्रमा भएकाले लगाइमाग्ने दाजुभाइ पश्चिम फर्कंदा सम्मुख हुन्छ । टीका लगाइदिने भन्दा लगाइमाग्नेका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसो गर्न अनुरोध गरिएको प्रा.डा. गौतमले बताए ।
थालीमै चित्रगुप्त, यमराज, यमुना, धर्मराज र गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजाआजा गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर सप्तरंगी टीका, मखमली, सयपत्री र गोदावरीलगायत फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ ।
टीका लगाइदिइसकेपछि घरको मूल ढोकामा ओखर फोड्ने चलन छ । यसो गर्दा सबै बाधा अड्चन हट्ने धार्मिक विश्वास छ ।
भद्रपुर बाट काठमाण्डौ उडेको जहाज बिरटनगरमा आकस्मीक अबतरण
on: In: Highlights, दुर्घटना, विश्व समाचार, समसामयीक
झापा कात्तिक २,
भद्रपुरबाट १ः३० बजे काठमाडौंका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज आज बिराटनगर एयरपोर्टमा अकस्मीक अबतरण गाराईएको छ । जहाजमा एसी नचलेपछि बिराटनगर विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको स्रोतले जानकारी गराएको छ।
जहाजमा सामान्य समस्या आएका कारण एसी नचलेको र तत्काल बिराटनगरमा अवतरण गराइएको एयरलाइन्सले पुष्टि गरेको छ । एयरलाइन्सका प्रमुख दीपक पोखरेलका अनुसार भद्रपुरबाट साढे १ बजे उडेको केहि समयपछि नै समस्या देखिएको र तत्कालै बिराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरिएको हो ।जहाजको मर्मत भइरहेको छ आजै मर्मत गरी काठमाडौंका लागि उडान गर्ने पोखरेलले बताउनुभयो दिए ।
‘टाइगर जिन्दा है’ को फस्ट लुकमा सलमानको अवतार
on: In: मनोरञ्जन, विश्व समाचार, समसामयीक
वलिउड सुपरस्टार सलमान खान को आगामी फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ को फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । खानले दिपावलीको शुभकामना दिँदै फेसबुकमार्फत फस्ट लुक सार्वजनिक गरका हुन् ।
पोष्टरमा सलमानले हातमा बन्दुक लिएका छन् भने अनुहारमा क्रोध देखिन्छ । फिल्ममा खतरनाक एक्सन देख्न पाइने निर्माण पक्षले बताएको छ । फिल्ममा सलमानसँगै कैटरीना कैफ पनि मुख्य भूमिकामा छिन् ।
यो फिल्म ‘एक था टाइगर’ सिक्वेल हो । कैटरीना कैफले पनि यो फिल्ममा धेरै स्टन्ट आफैले गरेकी छिन् । डिसेम्बर २२ मा रिलिज हुने यो फिल्मलाई कबीर खानले निर्देशन गरेका हुन् । – एजेन्सी
कार्तिक १, नेपाल र जोर्डनवीच आज श्रम श्रम्झौता भएको छ ।
श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र जोर्डनका समकक्षी डा. अली अली गेजावीबीच जोर्डनको श्रम मन्त्रालयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालको लामो समयदेखिको तयारी थियो । यसमा कार्यघण्टा, बिमा, अधिकार, आपूर्ति प्रक्रियालगायत विषयमा रहेका छन् ।
जोर्डनसँगको श्रम सम्झौताले नेपाली कामदारको कानुनी आधार निकै बलियो हुनुको साथै कामदारको लागि नयाँ गन्तव्य खुलेको श्रम मन्त्रालयलले जनाएको छ ।गार्मेन्टको क्षेत्रमा नेपाली महिला कामदारको माग उच्च रहेको जोर्डनमा झन्डै पाँच हजार नेपाली कार्यरत छन ।